Ukwenza imephu kwiihambo zabaThengi bakho | Martech Zone
Ungazenza njani iimephu zeehambo zabaThengi bakho
NgoLwesibini, Januwari 24, 2017 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Inkqubela phambili enkulu kuhlalutyo lokuthengisa kunye namaxwebhu kukuvela kwe iimephu zohambo lwabathengi ukunceda uxwebhu, ukulinganisa, kunye nokuphucula ukusebenza kwakho kwintengiso-ngakumbi kwi-Intanethi.
Yintoni imephu yohambo loMthengi?
Imephu yohambo lwabathengi yindlela owabona ngayo amava abathengi bakho ngophawu lwakho. Imephu yohambo lwabathengi ibhala amanqaku abathengi bakho kwi-intanethi nangaphandle kweintanethi kunye namaxwebhu ngendlela olinganisa ngayo ukusebenza kweepoyinti nganye. Oku kwenza ukuba abathengisi baqonde ngcono ukuba abathengi basebenzisana njani nawe ukuze ukwazi ukuphucula uhambo lwabathengi, ususe izikhewu kunye neendlela, ukuze wandise ukoneliseka kwabathengi, ukuzibandakanya, ukuguqula kunye namathuba e-upsell.
Ngokungafaniyo neenzuzo zabathengi ezilayini, uhambo lwabathengi lunokubonisa iindlela ezininzi apho abathengi bathatha izigqibo kwaye baphendula kunxibelelwano lwentengiso. Iimephu zohambo zabaThengi nazo zinokunceda iqela lakho lokuthengisa ukuba lijolise kwintengiso kunye nophuhliso lomxholo kubantu abathile babathengi. Ngelixa abathengi bakho banokuba nokujika okungenasiphelo kunye nokujika, kukho iindlela ezifanayo ngokubanzi oya kufumanisa ukuba abathengi bayahamba phantsi (okanye unethemba lokuba baya kuhla).
I-85% yabathengisi abakwinqanaba eliphezulu bakholelwa ukuba kubaluleke kakhulu ukwenza uhambo lomthengi oluhambelanayo, kodwa ngama-40% kuphela asebenzisa igama lomthengi kwikota. Kuphela yi-29% yeenkampani zeshishini ezikala ngokwazo ngokusebenzayo ekudaleni uhambo lwabathengi.
Hlanganisa idatha yohlalutyo esele ikho kwiwebhusayithi yakho kubahlalutyi, Iqonga lokuthengisa, iCRM, idatha yokuthengisa, kunye neminye imithombo.
Qokelela idatha ye-anecdotal ukusuka ekubekweni esweni kweendaba zentlalo kunye nengxelo yabathengi ukujonga ngaphezulu kunye nokubaluleka kwidatha yakho yohlalutyo.
Dibanisa amanqaku edatha ngokwamanqanaba ngaphakathi komda wexesha (umqolo) obandakanya unxibelelwano olufana nemibuzo, uthelekiso kunye nezigqibo. Bandakanya iinzame zakho zokuthengisa kwindawo nganye.
Tolika idatha kwaye uhlalutye isigaba ngasinye okanye indawo yokubamba ukuze uhambo lube lula, lukhawuleze, okanye lube mnandi.
Abathengisi bavelise le infographic intle, Iimephu zokuHamba kwabaThengi: Ungazikhokela njani iiNkokeli zakho, ukubonisa inkqubo yokubhala kuhambo lwabathengi bakho, uchaza isigaba ngasinye, kwaye usebenzise iimetrikhi ezifanelekileyo kwinqanaba ngalinye lala.
Amava oHambo loMthengi kwi-Salesforce
tags: ukuhlalutya idatha yabathengiamanqaku eedatha zabathengiuhambo lwabathengiiimephu zohambo lwabathengiimephu yomthengiIindawo zokuthinta abathengikhokelaguideskwenziwa kanjaniUkubonisa idatha yabathengiukuthengisaYintoni i
Ababhali abangaphezu kwe-100 babelana ngolwazi lwabo kwiNcwadi yeShishini eliNgcono
Isifundo se-InMoment sityhila amaqhosha ama-6 angalindelwanga wokwenza ubuNtu